Somaliland Oo Ku Dhawaaqdey In Ay Is Difaaci Doonto Hadii Somaliya Ay Duulan Ku Soo Qaado |
Somaliland Oo Ku Dhawaaqdey In Ay Is Difaaci Doonto Hadii Somaliya Ay Duulan Ku Soo Qaado
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, ayaa tilmaamay
inaanay Somaliland wax dagaal ah kula jirin dalkii ay kala baxeen ee Somaliya, balse ay diyaar u tahay inay is difaacdo haddii qaranimadeeda lagu soo weeraro.
Wasiir Sacad oo dalka Tanzania kaga qayb galay shir, ayaa isagoo saxafiyiinta kula hadlay magaalada Darasalaam ee dalkaas, wuxuu ganacsatada iyo maalqabeenada dalkaas ugu baaqay inay maalgashadaan Somaliland, gaar ahaan beeraha, wershadaha iyo arrimaha kale ee ay danaynayaan.
Somaliland waxay leedahay dawlad la soo doortay, ciidamo, lacag u gaar ah iyo calan u gaar ah, waxaanay u qalantaa in la aqoonsado. Waxaan aaminsanahay in qadiyadayadu leedahay sharci cad, mid bini-aadminimo iyo marka waxaas oo dhan laga tago taariikh.” ayuu yidhi Wasiir Sacad oo intaas ku daray in bulshada caalamku iska indho tirtay xaqa aayo ka tashi ee shacabka Somaliland oo ay ku waayeen daymihii iyo amaahihii ay ka heli lahaayeen beesha caalamka.
Wasiir Sacad wuxuu sheegay inaanay Somaliland dagaal kula jirin Somaliya, balse haddii ay dhacdo ay diyaar u yihiin inay qaddiyadooda difaacdaan, “Somaliland dagaal kulama jirto Somaliya, laakiin haddii ay dhacdo, waxaanu diyaar u nahay inaanu difaacno dalkayaga wakhti kasta. Waxa kale oo aan aaminsanahay marka aanu noqono qaran la aqoonsayahay inay Somaliya ka faa’iidi doonto.”